Madagascar – Korea Atsimo : fitaovana mitentina 28 tapitrisa dolara ho an’ny BNGRC | NewsMada
Madagascar – Korea Atsimo : fitaovana mitentina 28 tapitrisa dolara ho an’ny BNGRC
Nanolotra milina, fiara sy fitaovana isan-karazany mitentina hatrany amin’ny 28 tapitrisa dolara ho an’ny BNGRC ny Repoblikan’i Korea Atsimo tany Toamasina. Tafiditra ao anatin’ny tetikasa entina hametrahana ivontoerana hiatrehana ireo loza sy tandindomin-doza eny anivon’ny faritra 22 izao fanomezana izao.
Noraisin’ny filoha Rajaonarimampianina Hery tamin’ny fomba ofisialy ireto fitaovana ireto izay natolotry ny mpiandraikidraharahan’i Korea Atsimo, Pil-Woo Kim.
Ahitana kamiao vaventy 22 , fiara fitondrana marary 22, fiarabe ho an’ny mpamonjy voina 22, fitaovana fitrohana rano 22 …. ireo fanampiana avy amin’ny Repoblikan’i Korea ireo.
Hahafahan’i Madagasikara misoroka ny fahavoazana tafahoatra rehefa misy loza voajanahary sy miaro ny ain’ny mponina traboina ireo fitaovana ireo.
Mafy orina ny fiaraha-miasa eo amin’i Madagasikara sy i Korea Atsimo. Efa nisy ny fananganana foibe fianarana informatika nataon’ity firenena ity ao amin’ny polyteknika eny Vontovorona tamin’ny taon-dasa. Toraka izany ny fanomezana fitaovana informatika ho an’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro amin’ny faritra roa eto Madagasikara mba hampihenana ny fahavoazana ateraky ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Eo indrindra koa ny fiaraha-miasa amin’ny Unicef izay namatsian’i Korea Atsimo vola hatramin’ny 2 miliara dolara ho fitsinjovana manokana ireo ankizivavy amin’ny alalan’ny tetikasa “Better Life For Girls“.
Nanantitrantitra ny tokony hanajana ny fitaovana azo sy ny hisian’ny fiantraikan’ireo fitaovana ireo eny amin’ny mponina mila izany ny filoham-pirenena.
Tatiana A, Sajo